Fitaovana: vy / firaka
Size: Re daholo
Tanjona: fitaovana fizarana herinaratra
Ho an'ny tariby fibre optika karazana ADSS, fanamafisana ny conical automatique. Mora ny mametraka ny fandoavana ny onitra.
Niara-niaro ny ampahany rehetra.
Clamp vita amin'ny vatofantsika (clamp matevina) ho an'ny tariby ADSS ACADSS tariby fibre optika boribory napetraka amin'ny halavany fohy (100 m max) dia vita amin'ny vatan-tsoavaly vita amin'ny kofehy vita amin'ny kôkômby misokatra, mpivady plastika vita amin'ny plastika aryailam-bola azo avela, tsy mahazaka afo plastika sy afo tsy mahazaka afo ampiasaina hanohanana sy hiarovana ny lamba manify manify. Ny andian-tsarimihetsika ACADSS dia misy maodely isan-karazany amin'ny clamp izay manolotra karazana fahaiza-manaikitra sy fanoherana mekanika. Ity fahafaha-manao ity dia ahafahantsika manome soso-kevitra hamboarina ho voavolavola sy haingo arakaraka ny fananganana tariby ADSS.
PAL aluminium fihenjanana clamp
Ny fametahana vatofantsika dia natao hametahana ny tsipika lehibe misy sisiny misy conducteur 4 mankany amin'ny Pole, na andalana serivisy misy 2 na 4 mitondra ao amin'ny tsatokazo na rindrina. Ny fametahana dia misy vatana, wedges ary fandoavana na fanamainana azo esorina sy azo ovaina.
Ny lozisialy Anchor clamp dia natao hanohanana ny iraka tsy miandany, ny fanamboarana dia afaka manamboatra ny tenany ihany. Tariby pilot na mpampita jiro eny an-dàlana dia entina miaraka amin'ny clamp. Ny fanokafan-tena dia asongadin'ireo fotodrafitrasa loharano iray mampiditra mora foana ilay mpitarika ao anaty clamp.
NLL Clamp karazana lozam-pifamoivoizana
Ny fihenan'ny fihenjanana dia karazana fitaovana tokana misy fihenjanana izay ampiasaina amin'ny famitana ny fifandraisana am-polony amin'ny mpitantana na tariby, ary manome fanohanana mekanika an'ilay insulator sy conducteur. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny fametahana toy ny clevis sy maso socket amin'ny tsipika fandefasana overhead na tsipika fizarana.
Ny fantsom-panafody misy karazana bolt dia antsoina koa hoe clamp amin'ny faran'ny maty na clamp amin'ny quadrant.
Miankina amin'ny fitaovana, azo zaraina ho andiany roa izy: NLL andian-tsarimihetsika clamp dia vita amin'ny firaka aliminioma, raha ny andiany NLD kosa vita amin'ny vy mora volavolaina.
Ny clamp fihenjanana NLL dia azo sokajiana amin'ny alàlan'ny savaivony fitarihana, misy ny NLL-1, NLL-2, NLL-3, NLL-4, NLL-5 (mitovy amin'ny andiany NLD).
Ny clamp fampiatoana dia natao hanomezana ireo mpanentana ho fanampiana ara-batana sy ara-mekanika. Zava-dehibe izany indrindra rehefa napetrakao ireo mpampita ho an'ny tsipika fandefasana herinaratra ary na ny tsipika finday aza.
Ny fametahana fampiatoana dia manatsara ny fahamarinan'ny mpitarika amin'ny alàlan'ny famerana ny fihetsik'izy ireo indrindra amin'ny rivotra mahery, tafio-drivotra ary karazan-java-boahary hafa.
Vita tamin'ny vy nandrisika, ny clamp fampiatoana dia manana tanjaka ampolony ampy hanohanana ny lanjan'ireo mpitantana amin'ny toerana tonga lafatra. Ny fitaovana koa dia mahatohitra ny harafesina sy ny abrasion ary noho izany dia afaka manompo ny tanjona voalohany mandritra ny fotoana maharitra.
Ny fametahana fampiatoana dia misy endrika ergonomika marani-tsaina izay manome antoka fa ny lanjan'ilay mpitantana dia zaraina mitovy amin'ny vatan'ny clamp. Ity famolavolana ity dia manome zoro fifandraisana tonga lafatra ho an'ny mpitarika. Amin'ny tranga sasany dia ampiana counterweights mba hisorohana ny fiakaran'ny mpampita.
Fittings hafa toy ny voanjo sy bolts dia ampiasaina miaraka amin'ny clamp fampiatoana mba hanatsarana ny fifandraisana amin'ireo mpitarika.
Azonao atao ihany koa ny mangataka famolavolana mahazatra ny clamp fampiatoana izay mifanaraka amin'ny faritra apetranao. Zava-dehibe izany satria ny clamp fampiatoana sasany dia natao ho an'ny tariby tokana raha ny hafa kosa ho an'ireo mpitantana.
NES-B1 fihomboan'ny fihenjanana
Ny famaranana dia misy vatana lehibe, wedge ary peratra fananganana azo esorina sy azo ovaina.
Ny clip vatofantsika tokana dia natao hanohanana ny mpampita pneumatika ary azo ahitsy ho azy ny takilaka, ny tariby tariby misy ny jiro na ny jiro eny an-dàlana.
Ny fametahana dia vita amin'ny polymers mahazaka toetr'andro sy mahatohitra uV na vatana vita amin'ny alimika misy alim-bolo polymer.
Tsoraka mampifandray azo ovaina vita amin'ny vy narendrika mafana (FA) na vy vy (SS).
NXJ Aluminium Tension Clamp
Ny andiany NXJ dia mety amin'ny tadin'ny fantsom-baravarankely mitaingina 20kV fiaramanidina mitaingina aluminium tariby fototra JKLYJ terminal na faran'ny roa manamboatra sy manamafy ny insulation aerial.
Clamp fampiatoana aluminium
Ny fampiatoana fampiatoana dia ampiasaina amin'ny tsipika herinaratra mahery. Ny mpampita sy ny mpampita taratra dia mihantona amin'ny tadin'ny insulator na mihantona amin'ny tilikambo amin'ny alàlan'ny fifamatorana vy ny conducteur amin'ny tselatra. Vita amin'ny firaka alimina mahery